त्यहाँ कुन प्रकारको कम्पनी कार बीमा छन्? | अर्थव्यवस्था वित्त
एनकर्नी आर्कोया | 08/06/2021 11:29 | अद्यावधिक गरियो 14/06/2021 10:58 | बीमा
कार बीमा एक विषय हो जुन कुनै पनि गाडी मालिकले राम्ररी जान्दछ। जहाँसम्म, जब तपाईंसँग कम्पनी हुन्छ जहाँ कार वा अन्य प्रकारका कम्पनीहरूका गाडीहरू प्रयोग हुन्छन्, तिनीहरू विशेष बीमा बोक्दछन् कम्पनी कार बीमा.
तर ती बीमाहरू के हुन्? त्यहाँ कस्ता प्रकारका छन्? कसरी ती हिसाब गर्न सकिन्छ? त्यहाँ सामान्य कार बीमा भन्दा बढी लाभहरू छन्? हामी यसलाई तल तपाईलाई व्याख्या गर्दछौं।
1 कम्पनी कार बीमा के हो
2 कम्पनी कार बीमा का प्रकार
2.1 फ्लीट द्वारा बीमा
2.2 उही बेडेको बिभिन्न बिमा
3 कसरी कार बीमा गणना गर्ने
4 कम्पनी वाहन बीमा को लाभ
कम्पनी कार बीमा के हो
सामान्यतया, कम्पनी कार बीमा यसलाई बचाउने एक तरीका हो एक पेशेवर प्रयोग छ कि सवारी, त्यो हो, यो काम कार्य गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो निजी बीमाको रूपमा उस्तै छैन, उदाहरणको लागि तपाइँसँग तपाइँको कार वा मोटरसाइकलमा भएको छ, किनकि तपाइँ यसलाई कामको लागि प्रयोग गर्नुहुन्न, तर यात्रा, मनोरन्जनको लागि ... अर्को शब्दमा, व्यक्तिगत प्रयोग।
यस प्रकारको बीमा हुन्छ ती ज्ञात र बिभिन्न आवश्यकताहरूका भन्दा भिन्न अवस्था त्यो छनौट गरिएको प्रकारमा निर्भर गर्दछ (किनकि त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्)। तर कम्पनीहरु को लागि कार बीमा को प्रकारहरु को बारे मा कुरा गर्नु अघि, तपाइँ थाहा हुनुपर्छ कस्तो प्रकारको सवारी साधनसँग यसको बीमा गर्न सकिन्छ. सामान्यतया, तपाइँ निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ:
कम्पनी कारहरूको लागि. त्यो हो, यात्री कारहरूका लागि जुन तपाइँका कर्मचारीहरू वा कम्पनी ब्यवस्थापकहरूले काम गर्न सक्षम हुन प्रयोग गर्दछन्। यहाँ तपाईले भ्यान वा ट्रक पनि सामेल गर्न सक्नुहुन्छ किनकि ती डेलिभरी, यातायात, प्राविधिक सेवा को लागी प्रयोग हुने सवारी साधन हुन् ...
मेशिनरीका लागि. हामी मेशिनरी गाडीहरूको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं, जसमा बिमा पनि हुन सक्छ।
ट्रक र भारी वाहनहरूमा। तिनीहरू सवारीहरू हुन् जुन उनीहरूको सर्तहरूको कारणले गर्दा उनीहरूको लागि अधिक विशिष्ट बीमा आवश्यक छ।
बेडामा। अन्तमा, तपाईंसँग कम्पनी कार बीमा छ "फ्लीटहरू" का लागि, कम्पनीमा यति धेरै संख्यामा सवारी साधनहरू बुझ्ने गरी। उदाहरण को लागी, बस कम्पनीमा, तिनीहरूसँग बिभिन्न मार्गहरू कभर गर्न धेरै हुन सक्छन्।
कम्पनी कार बीमा का प्रकार
कम्पनी कारहरूको लागि बीमा रूपरेखा भित्र, हामी दुई प्रकारका फेला पार्दछौं:
फ्लीट द्वारा बीमा
तिनीहरू एक कम्पनी द्वारा सबै भन्दा राम्रो विकल्प छानिएका हो किनकि यो एकल अनुबन्धमा कम्पनीका सबै सवारी साधनहरूलाई समेटेर चित्रण गरिएको हुन्छ। यस तरिकाले, कभरेजमा आधारित बीमाको एक प्रकार छनौट गरिएको छ, तेस्रो पक्षको लागि अप्ट इन गर्न सक्षम हुँदै, विस्तारित तेस्रो पक्ष वा पूर्ण जोखिम बीमा।
र कुन कभरेज सबैभन्दा सामान्य हो? खैर, तिनीहरू विन्डोज, चोरी, आगो हुन सक्छन् ... सत्य यो हो कि कम्पनीहरूलाई ठूलो लचिलोपन दिइन्छ किनभने यो के हो भन्ने बारे प्रत्येक बीमाको आवश्यकतालाई ढाक्ने बीमा सिर्जना गर्नु हो।
एक विचित्रताको रूपमा, त्यो छ सबै वाहन नीति धारकहरूलाई आश्वस्त गर्नुपर्दछ, त्यो हो, सबैको लागि जो कुनै समय यो प्रयोग गर्न सक्दछ। कार भाडा कम्पनीहरूको बेडामा पनि, त्यस्तै भयो।
उही बेडेको बिभिन्न बिमा
कम्पनीहरूका लागि बीमा का प्रकार बीच अर्को विकल्प यसको प्रयोग अनुसार प्रत्येक वाहन बीमा छ। तिनीहरू समान उडानमा हुनेछन्, तर प्रत्येकको आफ्नै शर्तहरू र कभरेज हुनेछ।
Es धेरै व्यक्तिगत बीमा जस्तै, तर केहि फाइदाहरूका साथ, विशेष गरी यदि यो बीमा गर्नुपर्ने सवारीहरूको एक ठूलो संख्या हो। अवश्य पनि, धेरै जसो दुबैमा पॉलिसीधारक र बीमा मालिक एकै "व्यक्ति" हुन्, जुन कम्पनीको नाममा हुन सक्छ।
कसरी कार बीमा गणना गर्ने
अघि, एक बिमा कम्पनीमा कार बीमा गणना गर्न, तपाईं एक अफिसमा जानु पर्दछ ताकि तिनीहरूले विभिन्न विकल्पहरू, कभरेजहरूमा टिप्पणी गर्ने र तपाईंलाई त्यो बीमाको लागतको एक अनुमानित बनाउँथे। जे होस्, नयाँ टेक्नोलोजीहरूले यसलाई पछाडि छोड्ने र प्रक्रिया आफैमा आफैं ल्याउन सम्भव बनायो।
यो गर्नका लागि तपाईले गर्नु पर्छ बीमाकर्ताको वेबसाइट प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई रूचि छ र उनीहरूसँग एक फारम हुनेछ वा एउटा अंश जसमा तपाईले चाहानु भएको बिमा, वाहन र कभरेजको प्रकार निर्धारण गर्नुहुने केही चरणहरूको माध्यमबाट उनीहरूले अनुमानित मूल्यको साथ अन्तिम परिणाम (कहिलेकाँही स्क्रिनमा, अन्य पटक) दिन्छन्। उदाहरण को लागी, कार बीमा गणना गर्न सकिन्छ यहाँ.
अरूले के गर्छन् तपाईलाई फोन गर्न सल्लाह दिन सल्लाह दिन्छन् र हेर्नुहोस् यदि तपाई बिमामा रूचि राख्नुहुन्छ भने। ती अवस्थाहरूमा, तिनीहरू कहिलेकाँही तपाईंलाई अनलाइन दिएको मूल्य सुधार गर्न सक्दछन्, वा तिनीहरू अधिक लचिलो छन्। जे भए पनि, यो गणना अस्थायी हो, किनकि पछि तपाईले मूल्या coverage्कन गर्न सक्नुहुन्छ कि अधिक कभरेज समावेश गर्ने कि नगर्ने र, यसैले अधिक पूर्ण कार बीमा छ।
कम्पनी वाहन बीमा को लाभ
कम्पनी कार बीमा भएको विचार गर्दा, यो फ्लीट हो वा हैन, कम्पनीको लागि केहि लाभ लिन सक्छ। र यो एकल कारको बीमा गर्नु राम्रो होइन २० कारहरूमा गर्नु भन्दा। बीमाकर्ताहरू हुन्छन् सम्झौता हुन बीमाको संख्याको लागि महत्वपूर्ण बचत प्रस्ताव गर्दछ। कहिलेकाँही 40०% वा अधिक मूल्यमा र सम्झौता गरिएको कभरेजमा निर्भर गर्दछ।
तिनीहरूसँग व्यक्तिगत बीमा जत्तिकै कभ्रेजहरू हुन सक्छन्; वा अधिक कभरेज छ किनकि निजी कारलाई दिइने प्रयोग कम्पनी कार जस्तै होईन।
बीमा बढी लचिलो छ. कम्पनी बीमा अधिक लचिलो छ किनकि यसले व्यापारको विशेषताहरु, सवारी साधनहरुको संख्या र यसमा हुनु पर्ने सर्तहरु लाई अनुकूल बनाउँछ (यदि त्यहाँ बिभिन्न ड्राइभरहरूको लागि बीमा छ भने, सडकको सहायता, प्रतिस्थापन सवारी ...)।
प्रक्रियाहरू सुव्यवस्थित छन्. कम्पनीहरूले सामान्यतया केवल एउटा कम्पनी कार बीमा गर्दैन; धेरै गर्नुहोस्। र व्यवस्थापन एकल नीतिमा अपवादको साथ गरिन्छ।
तिनीहरू अनलाइन सम्झौता गर्न सकिन्छ. एउटा कार्यालय जानको लागि समय लिनको लागि बिदाइ; अब तपाईं तिनीहरूलाई अनलाइन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र सबै कुरा प्रबन्ध गर्नुहोस्।
बीमा गरिएको मर्मत. तिनीहरूले आफ्नो ब्राण्डको बीमा कार्यशालाहरूको बीमा कम्पनीको आफैँमा यस तरीकाले राख्दछन् कि यदि गाडीमा समस्या भएमा तिनीहरू मूल स्पेयर पार्ट्स सहित विशेष कार्यशालाहरूमा जान्छन्।
के तपाईं कम्पनी कार बीमा को बारे मा थाहा पाउन र बचत गर्न सुरू गर्नु लायक छैन जस्तो लाग्दैन?
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » वित्तीय उत्पादनहरू » बीमा » त्यहाँ कुन प्रकारको कम्पनी कार बीमा छन्?